आज शनिबार, झुक्किएर पनि नगर्नुहोस् यी कार्य : – Suchana Hub
आज शनिबार, झुक्किएर पनि नगर्नुहोस् यी कार्य :
काठमाण्डौ । शनिबारको दिन शनिदेवको विशेष दिन हो । शनिदेवलाई न्यायका देवता मानिन्छ । शनिदेवद्वारा नै हाम्रो स्संसारिक जीवनको कार्यक्षेत्र चह्लने विश्वाह चलिआएको छ । कर्म, सत्ता र यको प्रतिनिधी ग्रह भएकाले शनिको स्थान जन्मकुण्डलीमा निकै महत्वपुर्ण रहेको छ । प्रत्यक शनिवार शुद्ध मनले शनिको व्रत बस्दा शनि निकै प्रशान्नित हुने मानिन्छ । शनि, अर्थात् न्याको देव, राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो फल दिने देवता । तर हरेक दिन झैँ शनिवारको दिन पनि केहि कार्यहरु गर्न धर्मशास्त्रले व’न्चित गरेको छ । भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ ।
अझ शनिबारको दिन केहि चिजको भोजन गर्न समेत वन्चित गरिएको छ । शनिवारको दिन रातो खुर्सानीको प्रयोग नगर्नुहोस । त्यसको सट्टा कालो या हरियो खुर्सानिको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । शनिवार सादा दूध वा दहीको सेवन गर्नु राम्रो मानिदैन। तर दूधमा मह वा चिनी मिसाएर भने खान सकिन्छ। ३. शनिवार माछा मासु पनि नखानुहोस। अझ शनिको दशा चलेको बेलामा माछा मासुमा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। ४. शनिबार काँचो आपको अचार नखानुहोस। ५. शनिवार र’क्सी सेवन गर्नाले शनि राम्रो भएको बेलामा पनि अशुभ फल मिल्ने मान्यता छ । ६. शनिवारको दिन मसुरोको दाल नखानु नै राम्रो हुन्छ ।
Previous किन गरिन्छ शिवलिं’गको पूजा ?
Next शनिबार किन गरिन्छ शनिको पुजा? यति धेरै लाभ….